शैक्षिक शुल्कमा एकरुपता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मातहतमा सञ्चालन भईरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुका प्राविधिक विषयका नाममा उठाइदै आएको शुल्कमा एकरुपता छैन । सिटिइभिटिबाट मान्यता प्राप्त भई सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विषयहरुको शुल्कमा एकरुपता ल्याउन स्वयम् पालिकाले सकिरहेको अवस्था छैन । अझ भनौ शिक्षाका नाममा भित्रीरुपमा सिण्डिकेटको आरम्भ गर्न थालिएको छ । पालिकाभित्र हालसम्म आठ वटा विद्यालयहरुमा तीन …
आज घोराहीको बिपि चोकमा किनेको मेरो सत्ताइसौं मास्क हो । अस्ति बिपि युवा परिषदका अध्यक्ष सरोज शाहले दिएको मास्क पुरानो भैसकेपछि त्यहिंको पसलमा पन्ध्र रुप्पेमा मैले मास्क किनेको थिएं । यस्तो कुरा पनि किन लेखेको भनेर तपाईहरुले मलाई गालि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि म बाध्य भएर लेख्दै छु, तपाइहरुको जानकारीका …
बाँचेपछि सबै देख्न पाइन्छ भन्थे । हो रहेछ । हिजो राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमको सपथग्रहणको रोमहर्षक दृश्य देखियो । गौतमजीको व्यक्तित्व विवरण सबैलाई ज्ञातव्य नै छ । उहाँ ०७४सालको संघीय चुनावमा जनताबाट घोर तिरस्कृत पात्र हुनुहुन्छ । चुनाव लडेपछि हारिन्छ, या जितिन्छ– त्यो ठुलो कुरा होइन । चुनाव जित्नेले पनि …
मैले कोरोना देखिन….!
बेकरः किनकि दाङ जिल्लामा पालिकाहरुले सम्भावित संक्रमितको स्वाब संकलन नै गरेका थिएनन् । आज मेरो मुड अर्कै छ । तपाइले किन भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो मैले पछिल्लो प्याराग्राफमा बताउने छु । धेरै स्थानमा आज घुम्ने अवसर मिल्यो, किनकि हामी चल्न खोजेका थियौं, रुक्न होइन । अस्तीको लेखमा मैले देखें भन्ने थियो, …
मैले देखें….. : ‘पाँच सय रुप्पेमा पिसिआर परीक्षण’
यसपटकको डायरीमा म आफै पात्र हुँ, किनकि मलाई लेख्न मन लाग्यो । मेरा शब्द कसैलाई बिझाउन सक्छन्, कसैलाई रिझाउन सक्छन् । थाहा छ मैले कहाँबाट प्रसंग उठाउँला ? प्युठान जिल्लाको गंगा मावि लुङ वाहनेमा दश कक्षा पढ्दै गर्दा मेरो मनस्थिति फेरीएको थियो, व्यवहार फेरिएको थियो । तात्कालिन राजा विरेन्द्रको तस्वीर …
देश कसरी बन्छ ?
– जब सरकार आधा वर्षसम्म आफ्नै पार्टीको खिचलोमा जन आकाङ्क्षालाई लात हान्दछ र फेरि सत्ताकै चिरायुका लागि नाजायज सन्धि–सम्झौता मार्फत उत्पन्न समस्यालाई मत्थर पारेर दिग्विजयको डङ्का पिट्दछ,तब देश कसरी बन्छ ?– जब प्रतिपक्ष सत्ताधारी पार्टी कहिले फुट्ला र त्यसमै जम्लाहात गरुँला भनेर झिँगे दाउँ थापेर बस्छ, तब देश कसरी बन्छ …
श्राद्धको अर्थ र औचित्यबारे केही कुरा !
श्रद्धाको भावले, श्रद्धास्वरुप, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धेय व्यक्तिको लागि गरिने श्रद्धाजन्य कार्य हो श्राद्ध । संस्कृत भाषाको यो शब्दको संस्कृतमै ‘श्रद्धया दियते इति श्राद्धः’ यस्तै केही भनेर अर्थ गरिएको छ, जसको अर्थ होः श्रद्धाले दिइने वा गरिने कार्य श्राद्ध हो ! मेरो विचारमा बाबुआमा मरेको एकिन दिन तिथिमिति पत्ता लागेको अवस्थामा सोही …
मुलूक कोभिड–१९ को महामारीले विश्वआक्रान्त भईरहेको छ । नेपाल पनि कोराना भाईरस संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेन । सक्रमण हुनबाट बच्न र बचाउनको लागि सरकारले सबै प्रयास अवलम्वन गरेको छ । अहिले प्राय सबै जिल्लाहरु ठप्प छन् । मानिसहरु बन्दाबन्दीको सामाना गरिरहेका छन् । कोराना भाईरस संक्रमणबाट बच्ने सबै भन्दा अच्युत …
कोरोना अस्पतालको बन्दकोठाबाट स्वास्थ्यकर्मीको पत्र
म एउटा नेपाल सरकारको स्वा.कर्मी हो । म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा न ११ अन्तर्गत उरहरी स्वास्थ्य चौकी दाङमा कार्यरत छु । कहिले क्वारेन्टाइन त कहिले हेल्थ डेस्क त कहिले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दा गर्दै अनि कोभिड–१९ को विरुद्धमा लड्दा लड्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत कोभिड–१९ बाट संमक्रमित हुने म पहिलो स्वास्थ्यकर्मी …
बानेश्वरको होस्टलमा डाक्टरलाई आश्रय दिएको आरोपमा घरबेटीलाई स्थानीय भुस्तिघ्रेहरूले तथानाम गाली गरेको खबरले फेसबुकमा सम्पूर्ण चिकित्साकर्मीहरूको रोषपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे मेरो निजी हेड क्वार्टरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई प्रतिक्रियाका निम्ति उपस्थित भएको छु । डाक्टर लखेट्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा कतिपय चिकित्साकर्मीहरूले मेरो यो लेखप्रति कडा प्रतिवाद पनि गर्न सक्नेछन् …
« अघिल्लो पृष्ठ 123456… 14 अर्को पृष्ठ »